ပဲပင်ပေါက် ဖောက်ရအောင် ~ စန္ဒကူး
ကူးကူးရဲ့ တာလပေါဟင်း ဓါတ်ပုံတွေ့လိုက်လို့ လာပြတာ. . (ဖျက်ချင်ရင်ဖျက်လိုက်ပါ အီမေလ်ပို့မလုိ့ အီးမလ်ရှာမတွေ့လို့.)
မခင်ဦးမေရဲ့ စာဖတ်စွမ်းအားကိုတော့ တကယ်ချီးကျူးမိတယ်
ပဲပင်ပေါက်ကို နွမ်းအောင် မကြော်ဘဲ မကျက်တကျက်ကြော်တာကြိုက်တာ
သုပ်စားတာကြိုက်တယ် အစိမ်းကျတော့ အနံ့ရတယ်ထင်မိတယ် စားရခက်သလားလို့
ပဲစေ့လေးတွေ ရှိတာ အတော်ပဲဗျာ... လက်တည့်စမ်းကြည့်အုံးမယ်... အညာမှတော့ ပဲစေ့ကို ရေနွေးဖျောပြီး သဲထဲမှာ ထည့်အပင်ဖောက်တာ ပဲမြင်ဖူးတယ်။ အစ်မပြောသလိုလေးဆိုရင်တော့ လွယ်တာပဲနော်။ ကျေးဇူးပါအစ်မ လက်တည့်စမ်းကြည့်အုံးမယ်။ ပဲပင်ပေါက်ကိုတော့ အတော်ကြိုက်....
ပဲပင်ပေါက် ဖောက်နည်းလေး အတွက် ကျေးဇူး အစ်မကူးကူး။ စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ ပဲပင်ပေါက် ကြိုက်တယ်။
မမခင်ဦးမေ... လင့်ခ် အတွက်ကျေးဇူး.. ကူးကူး email.. mayllay@gmail.com
Rose, ရွှေညာသားလေး..ချောနဲ့ မမရှင်လေး.. စိတ်ဝင်စားရင် စမ်းကြည့်ပါနော်..
အခြားပဲစေ့တွေလဲဖောက်လို့ရတယ်ပြောတယ်.. စမ်းကြည့်ပြီးရင် တင်ပေးမယ်နော်...
အခုလောလောဆယ် ပဲပုပ်အစိုလုပ်ကြည့်နေတယ်.. ပျက်တာ ၄ ခါရှိပီ..မအောင်မြင်သေးလို့..း))
ကူးရေ..အသံမကြားလို့ နေမှကောင်းရဲ့ လားဘို့ တွေးနေမိတာ။
အိမ်မှာတုန်းကဖေါက်ဖူးတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ အိမ်မှာလုပ်တုန်းကအခွံလေးတွေဆေးရတာတော့နဲနဲအချိန်ပေးရသလိုဘဲ။
iora.. ဟုတ်တယ်..အခုတစ်လော အလုပ်များနေတာရော.. ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်တာရော ရှုပ်နေတာနဲ့...
အခွံလေးတွေက ရေ နှစ်ခါလောက်ဆေးရင် ကျွတ်သွားတယ်..
သူ့အလိုလိုလေ.. တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဘဲကျန်တယ်... အဲဒါလဲစားရင် ဘေးမဖြစ်ပါဘူး။ ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်.. ဗီတာမင်အပြည့်ဘဲလေ..
ပဲပင်ပေါက် ဖောက်ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ ။ ကျေးဇူးနော် ကူးကူးရေ။ ပဲပုတ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်
ဖောက်ကြည့်ဦးမယ်။ လက်တစ်ဆုတ်စာဆို တော်တော်ရတာကလား။ အဲဒီပဲအစိမ်းလေးတွေတော့ တွေ့တွေ့နေတာ။ ဒီမှာ ပဲပင်ပေါက်လဲ ဈေးကြီးသဗျ။
အမရေ ညီမ ပဲပုပ်အစို စမ်းတာ အဆင်ပြေတယ်။ ပဲကို တညလောက်ရေစိမ်တယ်။ နောက်နေ့ မနက်ရောက်တော့ ရေစစ်။ အိုးတလုံးထဲမှာ နူးနေအောင်ပြုတ်။ ပဲနူးသွားတော့ စကာကုံးထဲမှာ ငှက်ပျောရွက်ခင်း ပဲပြုတ်ထားတာထည့် အုပ်ထားပြီး အပေါ်က ပုလင်းနဲ့ ဖိထားလိုက်တယ်။ ၃၊၄ ရက်ကြာတော့ ပဲကပုတ်နေပြီ အချွဲလေးတွေ ကပ်နေပြီလေ။ အဲဒီတော့မှ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ချက် နံနံပင်လေးအုပ် အရမ်းကောင်းတာပဲ။
I've mung beans and will try it.Thanks for sharing.
I've done it successfully Kuu Kuu.Thanks.
ဟိုင်း.. မကူး ... ဒီဆိုဒ်လေးကိုတွေ့ လို့ ဖတ်ပြီးပြီးချင်းပဲ.. တွေ့ ရာ ပလတ်စတစ်ပုံး တစ်ခုကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ညတွင်းချင်းပဲ လက်တည့်စမ်းလိုက်တာ ၃ ၊ ၄ ရက်နေတော့အကောင်အထည်တော့ပေါ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် မကူး တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲကလိုတော့ မရဘူးဗျာ.. ထွက်လာတဲ့ ပဲပင်ပေါက်လေးတွေက သေးသေးလေးတွေ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အကြံဥာဏ်ပေးပါဦး...
ရေမှန်မှန်လေးလောင်းပေးရဲ့လား.. အခွင့်သာရင်သာသလိုရေပုံမှန်လောင်း ပေးနော်။
ပဲစေ့တွေလဲ အများကြီးမထည့်နဲ့အုံး... များရင်ကြပ်ပီးတော့ ပိစိလေးတွေဘဲ ထွက်လာမှာ..
မကူးရေ.... ရေလဲ မှန်မှန်လောင်းပါတယ်.. ပဲစေ့လေးတွေကိုလဲ ကျပ်နေအောင်မထဲ့ပါဘူး.. ပထမ တစ်ခေါက် က အဖုံးမပိတ်ပဲစမ်းကြည့်တာ..ခု ဒုတိယ တစ်ခေါက်ကို အဖုံးပိတ်ပြီး စမ်းကြည့်တော့ ပဲပင်ပေါက်လေးတွေက ရှည်တော့ရှည်လာပါရဲ့ ..ဒါပေမယ့် ပင်စည်က မရှည်ပဲ အမြစ်က ပင်စည်ထက်ပိုရှည်လာလို့ အဆင်မပြေပြန်ဘူး.. ခဏခဏ နားပူနားဆာ လုပ်မိတဲ့ အတွက် ဆောရီးပါ မကူးရေ..
ကျနော်တို့ ဆီမှာ ပဲပင်ပေါက်မရှိတော့ ခုလောက်ထိ အသဲအသန် မေးနေရတာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နှော...
ဘယ်လိုအကြံပြန်ပေးရမှန်းမသိဘူး.... အမြစ်လဲစားနော်.. အဲဒါ အဟာရအပြည့်ရှိတယ်.. အပင်ထက်စာရင်..
မကူး ရေ.. ခုထိပဲပင်ပေါက် ကို မမုန်းနိုင်အောင် ဖောက်ပြီးစားနေတုန်းပဲ... ပဲပင်ပေါက်ဖောက်တိုင်း မကူး ကို အရမ်းသတိရတယ်ဗျ... :)
ဟုတ်ကဲ့ပါ မောင်လေးကျော်လင်း.. အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါတယ်..
ပဲစေ့လေးတွေကို ရေနဲ့ တစ်ရက်လောက်စိမ်ပြီးဖောက်ရင် ပဲပင်ပေါက်လေး တွေ ပိုတုတ်လာတယ်..
Greetings! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to findatemplate or plugin that might be able to correct this problem.
Thanks million Sandakuu ... Can't wait to see my sprouts coming out..